(Redirected from Madeverangwena)
2 Mhando dzeHove
4 Kutsetsenura English
Bemba inoti isabi (n. fish) kureva hove. VaVenda vanoti khovhe (n. fish) vachireva hove. Nsenga sawi (n. fish) kureva hove.
Nyanja inoti kutseruka, kuseruka (to come up the river; to come over the bank of a river). Mamwe mazwi: kuseluka (to come up to the surface of; to separate from that which is below).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Hove&oldid=92934"
Last edited on 27 Kurume 2022, at 17:29
This page was last edited on 27 Kurume 2022, at 17:29.